Namootni isin footoo ykn suuraa jara asi gaditti argaa jirtan kanneen, namoota yeroo amma kana basasummaan wayyaaneen leenjiftee Ummataa keessatti gadi lakkiftee jirtuudha. – Welcome to bilisummaa
Namootni isin footoo ykn suuraa jara asi gaditti argaa jirtan kanneen, namoota yeroo amma kana basasummaan wayyaaneen leenjiftee Ummataa keessatti gadi lakkiftee jirtuudha.
Loltuu Wayyaannee Agazii jedhamuu keessaatti gara jabainaan lammii isaanii ajjeessaa fi mana hidhaatti waan sabboontoota gursisaa turaniif wayyaannee biratti beekamatii fi amanamummaa cimaa qaban.akka kanaan yeroo amma waraanumaa irraa basasuumaatti ramadamanii biyyaa keessaa fi ollaatti ergamaa akka jiran baramee jira.maqaan jaraa akka asi gadii kana ta’a.1ffaa, Ashebir Getahun,2ffaa,Ashee Abe, 3ffaa Misbahu Zenu. lukkeeleen wayyaanotaa kun Lubbuu sabboontoota oromoo hedduu kan galafatan tahuun isaanii baramee jira sabboontota fakkachuun oromiyaa dhihaa bahaa wallaggaa Naqmtee keessatti akka bartoota oromoo basaasaa turan iraa gahamee jira. yeroo amma kana haala adda addatiin Sabboontota Oromootii fi namoota Muslima ta’aanitti dhihaachuun akka namoota basaasa jiran hubatamee jira.naannolee Oromiyaa bakkoota adda keessaatti boobbaafamani jiru.Walloo kamisee, Baatee, Amboo,Jimmaa fi Wallaggaan keessaati. kanaaf akka sabboonton jabeessani of irraa eeggatan fii bakka arganitti gumaa sabboontoota irraa kafalatan keessaabeektooni ykn jaallaattootnii fi sabaa jaallattootni oromoo dhaama dabarfatani jiru!
Previous Gareen maqaa qabsootiin ummata keenya yeroo dheeraaf joonjeessaa baate amma waliif galle jedhu..
Next Walaloo Afaan Oromoo (Ramadaan Kariim) By Najiib Zannuun